Alii Birraa, “Anis Biyyaan Qaba, Biyya Biyyaa Caaltu …” Jechaa Sagantaa Galataa fi Ulfinna Isaatiif MNtti Kopheessaniifitti Dhufe
Posted: Adoolessa/July 6, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)
WASHINGTON, DC — Haga diqqeennaa jalqabee haga hardhallee ittuma jira, adoo akkanuma sirbuu deemuma deemee ganna 50 gahe, ammalele dhaabuu hin geennee hinuma sirbaa jedha.
Afaanii, aadaa, seenaa,Oromiyaa, siyaasaa, saba isaatii sirbaa akka namii hagii tokkoo jedhuutti ammoo lallabaa asi gahe, Alii Mohaammad Birraa.
Sagatnaan kun interneetii irraa yoosuma platlak, UStream fi waan hedduund abarsaa bahan. Guyyaan kun ka Alii fi sirbitoota Oromoo hedduullee hujii isaaniitiin itti faarsan.
Dargaggoo qophii tana kopheessite keessaa tokko, Eeliyaas Ibsaati, “Qophiin baayyee nama gammachiiftuu, qophii sabboonummaa Oromoo garsiiftuu … irbaataan boodatti dhaamsaa viidiyoo biyya keessaa fi biyya gara garaati dhufe ka si jaalannaa, si kabajnaa, hayyuu keenna, barsiisaa keenyaa jedhutti dhufee baayyee nama gammachiifti.”
Warra ulfinna Alii Birraatii dhufe keessaa tokko Dr. Mohaammad Hassan, Atlaantaa irraa dhufe “Alii Birraan kennaa Oromooti,” jedhe.
Kaan ammoo Dr. Gammachuu Magarsaatii biyyaa dhufe.Aliin eennu jetta jennaan “kennaa-waaqii Oromoo kenne, nama waaqii Oromoo kenne, qabsaahaa, saba isaa jaalatu waan isaa dubbatanii hin fixan.
Sirbii Alii akka Dr.Gammachuutti sirbuu qofaa miti lallaba, bara Oromoo mootummaa akka akkaa keessatti rakkate inni seenaan sun lallabaa dabarsa jedha.Waan Oromoon keessa jiruu fi keessa dabre lallaba.
“Callanqoo kahee oggaa yaadan dhibaman jiruu afaan wallaalanii ka jedhu keessaa waraana Calanqootii fi dhuma Oromootti jira … sanaan duuba birraadhaatti biri’e jedhe sun … oggaa Afran -Qalloon dhaabatetu waan akka Oromootti dhaabbate waan argateef birraatti nu bari’e sun waaqa itiin faarfate Oromoo biraan gahe.”
Alii bara waraanaatii fi bara gammachuullee akkanuma dubbata jedha Dr.Gammachuun.
“Calanaqoon duuba yoggaa waraani Baalee kahee Oromoon kaaniin somalee shirrixi lebaash jedhani fixanii Alii Birraan namii keenna kaan gaaratti baqdee uirraa faccisee oggaa dadhabe kaan fixan obsee yaa onnee jedhe … bara dargii Oromoo yaadaan gargar baasan … maaltu addaan nu baase nu ilmaan haadha tokoo jedhee faarse …
Tana malleellee biyyatti deebinaan ammoo, “eegii biyyaa bahe ammoo …miila taha malee garaan keena biyyaa hin baane … kallachaa tokkummaa hundee bilisummaa … jedhee faarse.”
Ganna 50essoo ulfinna Alii Birraatiif kopheessan irratti nama hedduutti dhufee dadhabbii Aliin ganna 50 afaan Oromootiin sirbee aadaa fi Oromo itti guddiseef badhaase, sagantaan kun yoosuma interneetii irraa “LIVE” dabarsaa turan.
Jul 7, 13 at 11:27 am
Ali birraa seenaa artii Oromoos tahee kan qabsoo OROMOO keessatti inni qabu guddaadha haata’u garuu Alii birraa yo ganamaan eegale illee artistootni hedduun kan itti wareegamanii fii qaamaa hir’atanis kan aliidhaa gad hin taane eddutu jioru. fakkeenyaaf kan akka Aaadam Haaruun, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Aduunyaa,Abdii-qophee fi k.k.f. heddtu jirani .fakkeenyaaf ergaan Abdii Ibraahimiif Falmataa roorroo dabarsan kan Aliin dabasu dachaan caala yoo biyya warra dhihaa jiraachuu dhaban malee kanaafuu waan takka gatii isaaf hin barbaachifne kennuufin barbaachisaa miti.